Side Uhlobo Breaker
Ukuthula Uhlobo Breaker
Uhlobo oluphezulu lwe-Breaker
Ungayigcina kanjani i-breaker ngesikhathi sokuqalisa
Ngenxa yokuthuthuka okusheshayo nokukhula komkhiqizo wezobuchwepheshe nokucubungula, kanye nokuthuthuka kancane kancane kwemishini yokusebenza emikhakheni ehlukahlukene, izidingo zemishini yokufaka isicelo ziya ngokuya zikhula. Kumele kwaziwe ukuthi imikhiqizo yabakhiqizi abakhulu be-breaker ...
Izinyathelo zokuqapha ngokusebenza kwebhuleki
I-breaker ingenye yamathuluzi asetshenziswa kakhulu kubemba. Ukuze udlale indima yawo esikhathini eside futhi ube ithuluzi elifanele, kufanele lisetshenziswe futhi ligcinwe kahle njengamanye amathuluzi. Kodwa-ke, ukungayinaki eminye imininingwane nokusebenza okungajwayelekile ngesikhathi sokusetshenziswa kuzoba nomthelela omubi ku-larg yethu ...
Ungayikhetha kanjani i-breaker
Amandla ephuka yi-excavator ne-Loader. Bangasusa ngempumelelo inhlabathi emifantwini ephakathi kwetshe le-pumice nedwala, ngaleyo ndlela badlale indima yokumba isisekelo sesakhiwo. Lapho ukhetha ikhefu elikhulu, lezi zinkinga ezilandelayo zidinga ukucatshangelwa: 1 ...
IKHELINO.157, FENGHUANGSHAN ROAD, FUSHAN ZONE YANTAI CITY, SHANDONG ISIFUNDAZWE